ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်း - Baoding Lead Fluid Technology Co. , Ltd.
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Flue Gas စောင့်ကြည့်
စဉ်ဆက်မပြတ် flue gas ထုတ်လွှတ်မှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ် (CEMS) သည်လေထုညစ်ညမ်းမှုရင်းမြစ်များမှထုတ်လွှတ်သောဓာတ်ငွေ့လေထုညစ်ညမ်းမှုများနှင့်အမှုန်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စုစုပေါင်းထုတ်လွှတ်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုအရည်အချင်းရှိသောအာဏာပိုင်ထံလွှဲပြောင်းပေးသောစက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်းနမူနာများမှတဆင့် flue gas အတွင်းရှိအညစ်အကြေးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ Flue gas အပူချိန်၊ ဖိအား၊ စီးဆင်းမှုနှုန်း၊ စိုထိုင်းဆနှင့်အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုများကိုတစ်ချိန်တည်းတိုင်းတာသည်။ ဓာတ်ငွေ့ညစ်ညမ်းတွက်ချက်နေကြသည်။
နမူနာဓာတ်ငွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ထဲသို့ ၀ င်ပြီးနောက်နမူနာဓာတ်ငွေ့ရှိအစိုဓာတ်ကိုအစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းစနစ်ဖြင့်လျင်မြန်စွာကွဲကွာသွားပြီးရေငွေ့ပြန်သွားသည်။ အစိုဓာတ်ဖြည့်ခြင်းစနစ်ကိုယေဘုယျအားဖြင့် condenser၊ နမူနာစုပ်စက်တစ်ခု၊ peristaltic pump နှင့်ဆက်စပ်သောနှိုးစက်များပါဝင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများ။ အဆိုပါ peristaltic စုပ်စက်ငွေ့ရည်ဖွဲ့လွှတ်ပေးရန်အသုံးပြုသည်။
Flue gas online monitoring system ၏အမှားအယွင်းများမှာ - condenser ၏အေးခဲစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်မသင့်တော်ပါ။ နမူနာ gas တွင်ရှိသောအစိုဓာတ်ပမာဏသည်ကွဲလွဲခြင်းမရှိသောကြောင့် flue gas analyzer ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုထိခိုက်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူအားပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
ဓာတ်ငွေ့စောင့်ကြည့်မှုသည်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးစနစ်၏တင်းကျပ်စွာသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရေငုပ်စက်စနစ်မှတဆင့်အပြင်သို့လေစီးဆင်းခြင်းနှင့်နမူနာဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းမှုကိုထိခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောတင်းကျပ်စွာထားရှိရန်ငွေ့ရည်ဖွဲ့တပ်ဆင်သည့်စနစ်လိုအပ်သည်။
အဆိုပါငွေ့ရည်ဖွဲ့ရှုပ်ထွေးဓာတုဖွဲ့စည်းမှုရှိပြီးတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ငွေ့ရည်ဖွဲ့ရေနုတ်မြောင်းစနစ်ကကောင်းသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ နမူနာဓာတ်ငွေ့ filtration အကျိုးသက်ရောက်မှုမကောင်းလျှင်, ငွေ့ရည်ဖွဲ့ရေအစိုင်အခဲအမှုန်များပါလိမ့်မယ်နှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ရေထုတ်ပေးသည့်စနစ်ပွန်းစားခြင်းအရည်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်သင့်သည်။ ရေစုပ်စက်သည်လေဟာနယ်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်သင့်တော်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်သည်.
KT15 စီးရီး peristaltic စုပ်စက်
• Lead Fluid KT15 စုပ်စက်၏ခေါင်းများသည် ID0.8 မှ ၆.၄ မီလီမီတာ၊ နံရံအထူ ၁.၆ မီလီမီတာဆေးကြောခြင်း၊ ဆီလီကွန်ပြွန်၊ Viton စသည်တို့အတွက်သင့်လျော်သည်။ 100rpm နှင့်အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်း 255ml / min အတွင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်ခြင်း၊ အမြန်နှုန်း 250rpm max စီးဆင်းမှု r သည် 630ml / min ကိုစားခဲ့သည်။
• KT15 စုပ်စက်၏ ဦး ခေါင်း roller ကိုယ်ထည်သည်ဂန္တ ၀ င် elastic ပုံသေဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်တိကျမှန်ကန်သောစီးဆင်းမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြွန်သက်တမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
• PPS ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ဦး ခေါင်းကိုယ်ထည်၊ PVDF ပစ္စည်းများ သုံး၍ roller body၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိနှင့်ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
• စုပ်ယူနိုင်သောပလပ်စတစ်ကို သုံး၍ ဦး ခေါင်းဖုံးသည်ပန့်ခေါင်း၏အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေကိုအဆင်ပြေစွာစောင့်ကြည့်ပြီးအပြင်ဘက်အပျက်အစီးများကိုစုပ်စက်၏ ဦး ခေါင်းအတွင်းသို့ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးခြင်း၊
• Installation tube တွင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ Connector built-in နှင့် spring tube clip ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
• Supply type 57 stepper motor, AC synchronous motor နှင့် AC / DC ဂီယာ motor drive, panel နှင့်အောက်ဘုတ်သတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းများသည်အရွယ်အစားသေးငယ်။ အလတ်စားတူရိယာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။
TY15 စီးရီး peristaltic စုပ်စက်
• Lead Fluid TY15 （နွေ ​​ဦး လွယ်ကူသော） ပန့်ခေါင်းသည်လွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အထက်ဖိခြင်း၊ နွေ ဦး roller ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြွန်ကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးသက်တမ်းပိုရှည်သည်။
• roller ကိုယ်ထည်သည်ဖမ်းဘီးဒီဇိုင်းနှင့်ပြွန်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောလည်ပတ်နိုင်မှုကိုရရှိသည်။
• အထူးပြွန် connector ကိုတပ်ဆင်ထားသည်, ပြွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော။
• မော်တာအမျိုးအစားများအတွက်သင့်တော်သည်။ အလယ်အလတ်စီး ၀ င်သော application များအတွက်သင့်တော်သည် COD, CEMS online monitoring အတွက်သင့်လျော်သောပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကိရိယာများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများစသည်တို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ခဲအရည် peristaltic စုပ်စက်၏အားသာချက်များ
၁။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာစီးနင်းနိုင်ပြီး၊ အဆို့ရှင်နှင့်တံဆိပ်ခတ်စရာမလိုပါ။ ပန့်သည်မလည်ပတ်လျှင်ပင်ရေပိုက်ကိုညှစ်။ ကောင်းစွာပိတ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်မှတဆင့် condenser ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များကိုထိခိုက်နိုင်သည်။
၂။ အရည်လွှဲပြောင်းသောအခါ၊ အရည်သည်ရေပိုက်၏အတွင်းပိုင်းအခေါင်းပေါက်နှင့်သာထိတွေ့မှုရှိသည်။ သင့်လျော်သောချေးသည့်ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရေပိုက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကြာရှည်စွာတောက်ပသောငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကိုလွှဲပြောင်းရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၃။ အစိုင်အခဲအမှုန်များပါ ၀ င်သည့်အရည်များကိုလွှဲပြောင်းရာတွင်အနိမ့်ညှပ်အားဖြင့်စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်အနှောင့်အယှက်မရှိသည့်အပြင်စုပ်စက်၏သက်တမ်းကိုလည်းထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
4. ခိုင်ခံ့သော Self-priming စွမ်းရည်ရှိခြင်းနှင့် pump သည်မည်သည့်ပျက်စီးမှုမှမပါဘဲခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် condensate ကိုထိရောက်စွာစီးဆင်းစေပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည်။